Somaliland.Org » Isbaheysi Cusub oo uu Dhisayo Cabdilaahi Yuusuf Iyo cabsi la soo deristay Hadhaagiisii?
Isbaheysi Cusub oo uu Dhisayo Cabdilaahi Yuusuf Iyo cabsi la soo deristay Hadhaagiisii?
November 30th, 2008 Comments Off Cabdilahi Yusuf ayaa siyaasadan cusub ee Somalia ku macneeyey mid uu dhabanada gacanta ku hayo,wuxuuna aad uga shakisan yahay inay noqonayso tani tii ka tuureeysa saaxada siyaasadda. Cahdigii Jabuuti ay ku gaadheen Nuur Cade iyo Shariifyadu ayaa waji cusub oo siyasadeed u furay Somalida badi waxaana muuqata isbedelo huwan yididiilo .
Cabdilahi Yuusuf ayaa lagu eedeeyey inuu yahay mushkilada Somalia ,iyo inuu wax wayn ka qaban waayey sidii Somalia nabad ugu soo noqonlahayd, 4tii sano ee ee uu horboodaayey.
Meles Zenawi ayaa eedeyntii uu huwiyey Cabdilaahi Yusuf ayaa qalbiga waxyeeshay siyaasad ahaan ,waxaana mowqifka beesha Caalamka wax ka duway hadalkaa Zenawi ee xal raadinta lagu saleeyey lana sheegay in Cabdulahi Yuusuf ku horkufay xal u helida xaalada khalafsan ee Somalida.
Ethiopia ayaa saaxiib fiican mar la ahayd Cabdilaahi Yuusuf, balse iminka ka wareegtay lana macaamishay hogaamiyaal taagero badan ka haysta shacabkooda sida Nuur Cadde ,sheekh shariif Axmed iyo Axmed C/salaan si ay wadanka Somaliya iyaduna degdeg uga haajirto.
Ilo u dhuundaloola Cabdilaahi Yuusuf ayaa tibaaxay inuusan taagero u hayn Heshiiska Jabuuti lagu gaadhay, Iyadoo Khubarada siyaasadda ay sheegeen inuusan Cabdilaahi Yuusuf marna ka mid noqon karin Maamul ay awooda la wadaagayaan Mucaaradku ,Si kastaba xaalku ha noqdee,Wuxuu Cabdilaahi Yuusuf Saaxiib la noqday siyaasad cusub oo u baahan inuu si tartiib tartiiba leh ula jaanqaado .
Hadaba Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu dhinaca siyaasada guuldarooyin la Hoyday Cabdilahi Yusuf ayaa waxaa warar hoose ay sheegayaan inuu haatan u tafaxaytay sidii uu uga hortagi lahaa heshiiska Jabuuti,isagoo ku talo jira qorshe uu ku dhisaayo Isbaheysi oo ka horjeeda Heshiiska Jabuuti, wuxuuna mar uu ka qeyb galay xaflad Jufo oday Dhaqameedka degaankiisa lagu dooranayey uu u sheegay Odayashiisa dega